बढ्दै जटिल खालका कोरोना संक्रमित, भरिँदै भेन्टिलेटर
बढ्दै जटिल खालका कोरोना संक्रमित, भरिँदै भेन्टिलेटर विज्ञ भन्छन्- यही गतिमा संक्रमण बढे भेन्टिलेटर नपाएर मृत्यु हुनेकाे संख्या बढ्न सक्छ
नेपाल लाइभ सोमबार, वैशाख ६, २०७८, ०९:४४
काठमाडौं - कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नेपालमा जटिल खालका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। जटिल खालका बिरामीको लागि छुट्याइएका आइसियु र भेन्टिलेटर कक्ष भरिएका छन्।
कोभिड-१९ को उपचारका लागि देशभर १ हजार १ सय ६ आइसियु र ४ सय ६१ भेन्टिलेटर छुट्याइएका छन्। जसमध्ये आइतबारसम्म १६२ वटा आइसियु र भेन्टिलेटर जटिल खालका बिरामीले भरिएका छन्। ११६ जना आइसियु र ४६ जना भेन्टिलेटरमा छन्।
भेन्टिलेटर चाहिने जटिल खालका बिरामीको संख्या दैनिक बढ्दो छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीको संख्या दैनिक उकालो लाग्दै गएको पुष्टि गर्छ।
भेन्टिलेटर चाहिने आधा संक्रमित काठमाडौं उपत्यकामा
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला 'रेड जोन' अन्तर्गत परेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या दिनहुँ उकालो लाग्दै छ। संक्रमितको संख्यामा वृद्धि मात्र भएको छैन, जटिलता पनि उत्तिकै बढ्दो छ।
देशभर हाल आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीको संख्या १६२ छ। जसमध्ये जटिल भेन्टिलेटर चाहिने करिब आधाजति संक्रमित अर्थात् ६६ काठमाडौं उपत्यकाका मात्र छन्।
प्रदेशगत रुपमा हेर्ने हो भने आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने संक्रमितको संख्या बागमती प्रदेशमै सबैभन्दा धेरै छ। बागमती प्रदेशमा मात्र ६० आइसियु र २८ भेन्टिलेटर बिरामीले भरिएका छन्।
कोरोनाको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पुनः कोरोना विशेष अस्पतालको रुपमा परिणत गरिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा जटिल खालका बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। अस्पतालले कोरोनाको उपचारका लागि २० आइसियु र ११ भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेको छ। यो पनि भरिभराउँ हुँदैछन्। यहाँ २० मध्ये ५ आइसियु र ११ मध्ये ४ वटा भेन्टिलेटर मात्र खाली छन्।
हाल ३९ जना संक्रमित उपचाररत छन्। जसमध्ये १५ जना आइसियु र सात जना भेन्टिलेटरमा रहेको अस्पतालका प्रमुख कन्सलटेण्ट डा अनुप बास्तोलाले बताए। आइसियु र भेन्टिलेटर जटिल खालका बिरामीको संख्या शुक्रराज अस्पतालमा दैनिक बढ्दै गएको उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘जटिल खालका बिरामीको संख्या दैनिक बढ्दै छन्। कोरोनालाई सामान्य रुपमा लिदा नै यो स्थिति सिर्जना भएको हो।’ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरे र कोरोनालाई सामान्य रुपमा लिए स्थिति अझ भयावह हुँदै जाने उनको भनाइ छ। हाल अस्पतालमा देखिएको संक्रमितको तथ्यांकले गत भदौ असोजमा बढेको संक्रमितको अवस्थालाई स्मरण गराउने उनी बताउँछन्।
संक्रमितको संख्या यही गतिमा बढ्दै गए केही दिनमा भेन्टिलेटर नपाएर मृत्यु हुने बिरामीको संख्या बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ। शय्या अभावमा बिरामीको मृत्यु हुन नदिन सबैले सावधानी अपनाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘भोलि बेड नपाउने र भेन्टिलेटरको अभावमा बिरामीको मृत्यु हुने अवस्था नआओस्। यसका लागि हामी आफैँ सतर्क हुन आवश्यक छ। कोरोनालाई सामान्य रुपमा लिने भूल कहिले गर्नु हुँदैन।’
महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि आइसियु र भेन्टिलेटरको आवश्यक पर्ने बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा छ। जटिल खालका बिरामीको उपचारका लागि यस अस्पतालले ११ शय्याको आइसियु छुट्याएको छ। जुन सबै भरिभराउँ छन्।
आइसियुमा रहेका ११ जना संक्रमितमध्ये तीन जनालाई भेन्टिलेटर चाहिएको कोभिड १९ व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा सन्तकुमार दासले बताए। हाल १७ जना संक्रमित आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत छन्। हाल कोरोना संक्रमण भइ जटिल अवस्थामा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै गएको उनले बताए।
बलम्बुस्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालमा पनि अवस्था उस्तै छ। आइसियु र भेन्टिलेटर भरिदै गएका छन्। अस्पतालले २० आइसियु र ८ वटा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेको छ। तर अहिले नै यो संख्या भरिदै गएका छन्।
हाल ५६ जना संक्रमित उपचाररत छन्। जसमध्ये १४ जना आइसियु र ४ जनालाई भेन्टिलेटर चाहिएको अस्पतालका प्रहरी उपरीक्षक डा प्रवीण नेपालले बताए। बिरामीको चाप अनुसार आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन सकिने उनले बताए।उनले भने, ‘अहिले आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिएर अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढ्दो छ। हामी आवश्यकता र चाप अनुसार बढाउँदै लैजान सक्छौ।’
वीर अस्पतालमा पनि भेन्टिलेटर चाहिने बिरामी थेग्न नसक्ने देखिएको छ। कोभिडको उपचारका लागि वीर अस्पतालमा दुई वटा भेन्टिलेटर मात्र छन्। जसमध्ये अहिले एक जना बिरामीलाई उक्त भेन्टिलेटर प्रयोग गरिएको छ।
हाल अस्पतालसँग १० वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध रहेपनि कोभिडका लागि दुई वटा भेन्टिलेटर मात्र छुट्याइएको कोभिड फोकल पर्सन डा अच्युतराज कार्कीले बताए। बाँकी आठ वटा भेन्टिेलटर नन कोभिडको बिरामीको लागि चाहिने उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘हामीसँग अहिले १० वटा भेन्टिलेटर मात्र छन्। जसमध्ये कोभिडका लागि दुई वटा मात्र उपलब्ध गराउन सक्छौं। बाँकी ननकोभिड बिरामीको लागि आवश्यक पर्छ। त्यसैले भेन्टिलेटर चाहिने दुई भन्दा बढी बिरामी आए हामीलाई समस्या पर्छ।’ वीर अस्पतालमा हाल १७ जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन्। जसमध्ये ५ आइसियु र एक जना भेन्टिलेटरमा छन्।
अस्पतालले थेग्न नसक्ने अवस्था आउँछ
कोरोना भाइरस हाल आक्रामक शैलीमा फैलिदै गएको विज्ञहरुको विश्लेषण छ। यही गतिमा संक्रमण फैलिदै गए अस्पतालले बिरामीको संख्या थेग्न नसक्ने अवस्था आउने जनस्वास्थ्य विज्ञ डा समीरमणि दीक्षित बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिले कोरोना संक्रमण निकै आक्रामक शैलीमा फैलिरहेको छ। एकै दिन हजार बढी संक्रमित भेटिनु भनेको सामान्य होइन। यो झनै बढ्ने देखिन्छ।’
कोरोनाको संक्रमणको चेनब्रेक गर्न अति प्रभावित जिल्लामा लकडाउन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। देशभर नभई जोखिमका आधारमा सरकारले लकडाउनको विकल्प सोच्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। ‘म आफैँ पहिला लकडाउन गर्न हुँदैन। अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने गर्थें’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्था हेर्दा सबै ठाउँमा होइन तर अति प्रभावित क्षेत्रमा भने लकडाउन गर्नुपर्ने सोच्ने बेला आएको छ।’
हाल देखिएको नयाँ भाइरस तिव्र गतिमा फैलिरहेकाले कम्तीमा पनि १५ दिनको लकडाउन गर्नुपर्ने उनले बताए। कोरोना सर्ने जोखिम भएका भीडभाड हुने क्षेत्रलाई बन्द गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने उनले बताए।
‘संक्रमण बढ्ने क्रम पहिले र अहिले धेरै फरक छ। सरकारले अब यो जिल्लामा यति आइसियु र भेन्टिलेटर छ। यो भन्दा बढी बिरामी आए हामी थेग्न सक्दैनौ भने र नियन्त्रण बाहिर गए लकडाउन आवश्यक छ,’ उनले भने। जटिल खालका समस्या लिएर अस्पताल भर्ना हुने क्रम बढ्दै गए मृत्युदर पनि बढ्दै जाने उनी बताउँछन्। सरकारले संक्रमणको यो गतिलाई रोक्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। उनले भने, ‘अस्पतालमा जटिल खालका समस्या लिएर भर्ना हुने क्रम बढ्दो छ। जुन रफ्तारमा यो बढीरहेको छ। यो रफ्तार रोक्नैपर्ने हुन्छ। यही क्रम रह्यो र बिरामीले बेड पाउने अवस्था रहेन भने मृत्युदर बढ्छ।’
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा अनुप बास्तोला कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि व्यक्तिहरु सेल्फ लकडाउनमा बस्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अत्यावश्यक बाहेक बाहिर ननिस्कने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरे जोखिम कम गर्न सकिन्छ।
विद्यालय लगायत भीडभाड हुने स्थलमा कडाईका साथ सरकारले बन्द गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ। कोरोनाका लक्षण भएका व्यक्ति तत्काल परीक्षणका लागि अस्पताल जानुपर्ने उनले बताए। ‘यस्तो अवस्थामा सिनेमा हल किन जानुपर्यो? घुम्न अनि पिकनिक मनाउन किन जानुपर्यो? यो बेला अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन हुँदैन। हामी आफैँ सेल्न लकडाउनमा बस्नुपर्छ’ उनले भने।